January 10, 2022 - Achawlaymyar
၅ နှစ်အတွင်း အမြန်ဆုံး ပိုက်ဆံချမ်းသာမယ့် နည်းလမ်း
January 10, 2022 by Achawlaymyar
လူတိုင်းက ချမ်းသာချင်ကြပါတယ်။ ကြိုးလည်းကြိုးစားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတော်တော်များများကို မေးကြည့်လိုက်ရင် ငါတစ်နေ့ချမ်းသာရမယ်လို့ပဲ ဖြေကြတယ်။ တိကျတဲ့ အဖြေတစ်ခုကိုမရဘူး။ တစ်နေ့ကြရင်ဆိုတော့ နောင်(5)နှစ် (10)နှစ်လဲ မသေချာပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ကြိုးစားရင်းနဲ့အချိန်တွေကုန်သွားမှာပါပဲ။ ကိုယ်ကတကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာချင်ရင်တော့ တိကျတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ၁။ “ကိုယ်က ငွေပမာဏဘယ်လောက်ထိ ပိုင်ဆိုင်ချင်တာလဲ ဆိုတာသိရပါမယ်” ၂။ “အဲ့ဒီငွေပမာဏကို ဘယ်အချိန်မှာပိုင်ဆိုင်ချင်တာလဲဆိုတာ သိရပါတယ်” ၃။ “ကိုယ်လိုချင်တဲ့ငွေပဏနဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာကို စာအုပ်ထဲမှာချရေးရပါမယ်” ၄။ “ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပမာဏနဲ့ အချိန်ကိုတွက်ပြီး ပထမနှစ်မှာဘယ်လောက်၊ ဒုတိယနှစ်မှာဘယ်လောက်ဆိုပြီး နှစ်အလိုက်ပြန်ခွဲရေးပါ” ၅။ “(၁)နှစ်မှာဘယ်လောက်ရှာရမယ်ဆိုတာကို သိပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်လက်ရှိအလုပ်နဲ့ဝင်ငွေက ထိုပမာဏကိုမရနိုင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ကနောက်ထက် ထိုပမာဏကိုရနိုင်မဲ့ အလုပ် ဝင်ငွေတွေကိုထပ်ပြီး ဖန်တီးရပါမယ်” ဒါကြောင့် (၅)နှစ်အတွင်းမှာ အောင်မြင်ချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ငွေပမာဏနဲ့အချိန်ကို (၁)နှစ်စီ ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီး ချရေးပါ။ … Read more
ထုံးတို့ မီးသွေးတို့ မျှစ်တို့များ ဘယ်တော့မှ စျေးမဆစ်ပါနဲ့..
ကိုယ့်အဖေလည်းပြောဖူးတယ်..ထုံးတို့မီးသွေးတို့/ မျှစ်တို့များဘယ်တော့မှ//၊ စျေးမဆစ်ပါနဲ့သမီးရယ်.တဲ့.မဝယ်နိုင်ရင်မဝယ်ပဲနေလိုက်ပါတဲ့..ထုံးဖုတ်မီးသွေးဖုတ်အလုပ်ဆိုတာပူပူလောင်လောင်နဲ့ လုပ်ကိုင်ရလို့..သိပ်ပင်ပန်းဆင်းရဲကြတာ ကိုယ်ချင်းစာပါသမီးရယ်တဲ့.. ”မဆစ်နဲ့”မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) နဲ့ပက်သက်လို့ ဖေဖေ့စိတ်ထဲမှာစွဲသွားတာလေးတခုက “မဆစ်နဲ့” ဆိုတဲ့ စကားလေး သမီးရဲ့။ ဟုတ်တယ် သူပြောဖူးတယ်…… ” မဆစ်နဲ့”လို့။ခရီးတစ်ခုတော့ ခရီးတစ်ခုပဲ သမီးရဲ့။ မကွေးဘက်လား၊ မုံရွာဘက်လား၊ဒါမှမဟုတ် မတ္တရာဘက်လား၊ ဖေဖေကောင်းကောင်း မမှတ်မိတော့ဘူး။အဝေးပြေးကားကြီးနဲ့သွားကြရာက.. တစ်နေရာ ကားခဏထိုးရပ်လိုက်တဲ့အခါရေသန့်ဘူးရောင်းတဲ့ ကလေးမ ကလေးတစ်ယောက် ကားအနားကို ကပ်လာပါလေရောလို့ ဆိုပါတော့။ရေခဲစိမ်ထားလို့ထင်ပါရဲ့၊ သူ့လက်ထဲက ရေသန့်ဘူး သုံးလေးဘူးဟာ ရေတွေသီးလို့.. ခြစ်ခြစ်တောက်အောင်ပူတဲ့ အညာနေရဲ့ အောက်မှာ “ရေသန့်ဘူး၊ ရေသန့်ဘူး”ဆိုတဲ့ အသံလေးဟာ စာ နေတာပဲ။နဂိုမူလ ညိုတဲ့အသားကလေးဟာ နေအရှိန်မှာ ခြောက်နွမ်းလို့ပေါ့။ထုံးစံအတိုင်း ဆရာချစ်ဦးညိုက ရေသန့်ဘူးဝယ်ဖို့ ပြင်ဆင်ပါတယ်.. ဟဲ့ သမီးလေး ရေသန့်ဘူး ဘယ်လောက်လဲ ဘာညာပေါ့။ ကလေးမကလေးက သုံးရာ … Read more
ရေတွင်း ပြန်တူးကြည့်ပါ ( ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ် )
တစ်ခါက လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ ယာတော မှာ ရေလိုလို့ ရေတွင်း တစ်တွင်းတူးပါတယ် ။ အတောင် ( ၂၀ ) လောက်လည်းရောက်ရော လူလည်း တော်တော် ကြီးကို မောပန်း နေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ရေတွေ့မယ့် အရိပ် အယောင်အနံ့ အသက်တောင်မှ မရသေးပါဘူး ။ ဒါနဲ့ အမောဖြေ နေတုန်း လူတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ပြောပါတယ် ။“ ခင်ဗျားဗျာ ၊ ဒီလို နေရာမှာရေတွင်းတူးလို့ ဘယ်ရေ တွေ့မှာလဲ ။ လာ ကျွန်တော်ပြတဲ့ နေရာမှာသာ တူးလိုက် ၊ အတောင် ( ၂၀ ) မပြည့်ခင်ရေ မတွေ့ရင် ကျုပ်ကို ပြောချင်သလိုပြော ” … Read more
အရင္တုန္းက စိတ္မႏွံ႔ဘဲ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာဘုရင္တပါး ရွိခဲ့ပါတယ္
အောက်တွင် Unicode ဖြင့်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ စိတ္မႏွံ႔ဘဲ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာဘုရင္တပါး ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ၈ ဆက္ေျမာက္မင္းျဖစ္သူ သာယာဝတီမင္း (ေခၚ)ကုန္းေဘာင္ မင္း(ေခၚ)ေ႐ႊဘိုမင္းမွာ စိတ္ေနာက္သြားေသာမင္းအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ ငယ္အမည္မွာ ေမာင္ခင္ ျဖစ္သည္။ ေနာင္ေတာ္ဘႀကီးေတာ္မင္းကိုပုန္ကန္ၿပီး ထီးနန္းရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုန္ကန္ရျခင္းမွာ ေနာင္ေတာ္သည္ စိတ္မက်န္းမမာျဖစ္ေနသည္က တစ္ေၾကာင္း နန္းတြင္းမွာ နန္းမေတာ္မယ္ႏုႏွင့္ သူမအကိုျဖစ္သူ မင္းသားႀကီးေမာင္အိုတို႔က ျခယ္လွယ္ခ်င္သလို ျခယ္လွယ္ေနၾကသည္ကတစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေ သာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သာယာဝတီမင္း၏ပုန္ကန္မႈကို ဘႀကီးေတာ္မွ သူ႔ရဲ႕တပ္မ်ားအားေစလႊတ္၍ ႏွိမ္ႏွင္းေစခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဘႀကီးေတာ္သည္ညီအရင္းျဖစ္သူ သာယာဝတီမင္းထံသို႔ ထီးနန္းကိုလႊဲအပ္ေပးလိုက္ ရပါေတာ့သည္။ ေနာင္ေတာ္အား ခမည္းေတာ္ကဲ့သို႔ ေစာင့္ေရွာက္ကာ စိတ္ခ်မ္းသာစြာစံေနေစသည္။ နန္းမေတာ္မယ္ႏုတို႔ကို မကြပ္မ်က္ပဲ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ေနေစခဲ့သလို တူေတာ္ေညာင္ရမ္းမင္းသား (စၾကၤာမင္းသား)ကိုလည္း သားေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္တန္းတူ မင္းသားႀကီးအဆင့္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း … Read more
စီးပွားတက်မည့်အိမ် ရေဆန်အိမ်တို့ဆိုတာ ဒီလိုအိမ်မျိုးတွေပါ
စီးပွားတက်မည့်အိမ် ရေဆန်အိမ်တို့ဆိုတာ ဒီလိုအိမ်မျိုးတွေပါ။အိမ်၏ခေါင်းရင်း နေအိမ်သည် မိမိအိမ်ထက်မြင့်မည် ခြေရင်းအိမ်သည်လည်း မိမိအိမ်ထက်မြင့်ပါက ကိုယ်နေသောအိမ်သည်အမိုးနိမ့်နေလျှင် အိမ်ပုခက်ဟုခေါ်သည်။ နေသောမိသားစုသည်စီးပွားတက်၏။ ကိုယ့်အိမ်ခေါင်းရင်းအိမ်က အမိုးနိမ့်မည်။ ကိုယ့်အိမ်ခြေရင်းကလဲ အမိုးနိမ့်မည် ကိုယ့်အိမ်ကအလယ်မှ အမိုးမြင့်မားနေပါက အိမ်မြင့်မိုရ်ဟုခေါ်သည်။ လူကြီးမိဘတို့ကို ခေါင်းရင်းဘက်ထား၍ ပြူစုလုပ်ကျွေး အားသဒ္ဓါပြည့်က အထူးကောင်းမွန်၏။ ကိုယ့်အိမ်၏ ခေါင်းရင်းကမြင့်မည်။ ကိုယ့်အိမ်၏ ခြေရင်းကကိုယ့်အိမ်ထက်နိမ့်နေပါက အိမ်တောင်တန်းဟုခေါ်သည်။ တစ်စိမ့်စိမ်စီးပွားဖြစ်၏။ ကိုယ့်အိမ်၏ ခေါင်းရင်းကနိမ့်၍ ကိုယ့်အိမ်၏ခြေရင်းအိမ်က မြင့်နေပါက စီးပွားအသည်းအသန်ရှာရတတ်သည်။ ရေဆန်အိမ်ဟုခေါ်သည်။ ရှေးလူကြီးများက မဝယ်သင့်ဟုဆိုကြ၏။ ကိုယ့်အိမ်၏ ခေါင်းရင်းနားတွင် မီးဖိုအကြီးကြီးဖြင့် စီးပွားရှာသော အိမ်ရှိနေပါက ထိုအိမ်ကို ဘုရားဆောင်ရွှေ့ခြင်း သို့မဟုတ် အိမ်အမိုးထပ်မြှင့်ခြင်းပြုအပ်၏။ မကျန်းမမာဖြစ်တတ်၏။ ဦးခေါင်း အပူတိုက်ဟုခေါ်ကြသည်။ သတိထားအပ်၏။ ကိုယ့်အိမ်၏ ဘေးဘယ်ညာအိမ်တို့မှ ဆူညံစကားပြင်းသော အသံချဲ့စက်ဆောင်းဘောက်စ်အသံ အဆဲအဆိုနူတ်ကြမ်းတမ်းခြင်းပြုလုပ်နေပါက ထိုအိမ်သည် … Read more
ပေါက်ပွားပျံ့နှံ့မှု အတော်များနေပြီ၊ နောင်ဆို ငါးကို နိုင်ငံခြားက မှာစားရပါတော့မယ်
ပေါက်ပွားပျံ့နှံ့မှု အတော်များနေပြီ၊ နောင်ဆို ငါးကို နိုင်ငံခြားက မှာစားရပါတော့မယ် စုပ်ခွက်ငါး ပေါက်ပွားပျံ့နှံ့မှု အတော်များနေပြီ၊ နောင်ဆို ငါးကို နိုင်ငံခြားက မှာစားရပါတော့မယ်.. စစ်ကိုင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များတွင် စုပ်ခွက်ငါးများ အများအပြား တွေ့ရှိလာရခြင်းကြောင့် ငါးအထွက်နူန်း လျော့ကျလာပြီး ဒေသခံ ရေလုပ်သားများ အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရသည်။ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အင်းများတွင် လွန်ခဲ့သည့် (၅) နှစ်ခန့်မှ စတင်ကာ စုပ်ခွက်ငါးများ အများအပြား တွေ့ရှိလာကြောင်း၊ ပိုက်တစ်ကြိမ်ဖော်လျှင် စုပ်ခွက်ငါး ပိသာထောင်နှင့်ချီကာ ပါရှိပြီး အဆိုပါ စုပ်ခွက်ငါးများကို စားသုံးသူ မရှိခြင်း၊ ရောင်းချ၍ မရခြင်းကြောင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေရသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောပါသည်။ “(၅) နှစ်အတွင်း သိသိသာသာ စုပ်ခွက်ငါးတွေ အတွေ့များလာတယ်။ ပိုက်တစ်ခါဖော်ရင် ပိဿာထောင်ချီတွေ့တယ်။ ကျန်တဲ့ငါးတွေက … Read more
ဆိုင်ကယ်ရောင်းရင် မကောင်းတာတွေ၊ ချွင်းချက်တွေကြည့်ပြောရောင်းနေသော ဆိုင်ရှင်အား ဘာလို့အလို့ရောင်းရတာလဲလို့ မေးလိုက်သောအခါ
ဆိုင်ကယ်ရောင်းရင် မကောင်းတာတွေ၊ ချွင်းချက်တွေကြည့်ပြောရောင်းနေသော ဆိုင်ရှင်အား ဘာလို့အလို့ရောင်းရတာလဲလို့ မေးလိုက်သောအခါ ဆေးကျောင်း ဒုတိယနှစ်တက်နေတဲ့အချိန်.. ဧပြီလ ကျောင်းပိတ်လို့ ပဲခူးအိမ်ကို ပြန်နေတုန်း… တနေ့မှာ…ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်း ဆိုင်ကယ်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ကို အလည်သွားဖြစ်တယ်… အဲ့ခေတ် အဲ့ဒီအချိန်က…. ဆိုင်ကယ်တွေကို အောက်လမ်းကနေ သယ်ယူလာပြီးမှ ပြန်ရောင်းကြရတာ… အဲ့ဒီ ဆိုင်ကယ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာထိုင်နေတုန်း… ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ဆိုင်ကယ်ရောင်းနေတဲ့ ပုံစံကို သတိထားမိတယ်… သူ့နာမည်က ဦးမင်း (အမည်လွှဲ).. ကျွန်တော့် ဦးလေးနဲ့က ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ… ဦးမင်းက ဆိုင်ကယ်လာဝယ်တဲ့သူတွေကို… ဒီဆိုင်ကယ်က ဘာချို့ယွင်းချက်ရှိတယ်၊ ဒီဆိုင်ကယ်က ဘယ်အချက်တွေ မကောင်းဖူး… ဒီအချက်တွေတော့ ကောင်းတယ်… စသည်ဖြင့် အသေးစိတ် ရှင်းပြနေတယ်… ပထမ ကျွန်တော်ထင်နေတာက အခုလာဝယ်တဲ့သူက ဦးမင်း မိတ်ဆွေဖြစ်လို့… အသေးစိတ်ရှင်းပြနေတယ်လို့ ထင်နေတာ…. နောက်ထပ် လာဝယ်တဲ့သူ … Read more
ငွေကံမပွင့်သူများ၊ လာဘ်ပိတ်၍ စိတ်ညစ်နေသူများ သစ်တံခါးဆရာတော်ချီးမြှင့်သော ဒါနအဓိဌာန်လေး ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါ
ငွေကံမပွင့်သူများ၊ လာဘ်ပိတ်၍ စိတ်ညစ်နေသူများ သစ်တံခါးဆရာတော်ချီးမြှင့်သော ဒါနအဓိဌာန်လေး ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါ ငွေကံမပွင့် လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေပါက လုပ်သမျှ မအောင်မြင်ဖြစ်နေပါက မိမိတို့စားမည့်ဆန်အိုးထဲမှ အနည်းငယ်မျှသောဆန်ကို ယူပြီး မြေကွက်လပ်နေရာတစ်ခု စီစဉ်ပြီး စာကလေးတွေကို အစာကျွေးပါ။ (အာရုံထားပုံ) စိတ်ထဲမှနေပြီး ယခုဒါနပြုခြင်းသည် မိမိတို့စားမည်ဖြစ်သော ဆန်အိုးထဲမှ၊ ဆန်အိတ်ထဲမှခွဲဝေ၍ ဒါနပြုခြင်း၊ အလှူဒါနပြုခြင်း ဖြစ်ပါ၏။ဤမှန်သော သစ္စာစကားတော်ကြောင့် စီးပွားကျ စိတ်ညစ်နေရပြီး ပိတ်ဆို့နေသော လာဘ်လာဘများ ပွင့်ပါစေ၊ လာဘ်လာဘတွေ ရွှင်ပါစေ၊ငွေဝင်ပါစေ၊ စိတ်မှ ရည်မှန်းပါ။ ယခုလာရောက်၍ သုံးဆောင် စားသုံးကြသော စာကလေး၊ ခို၊ကျီးငှက်ကလေးတွေဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကာစားသုံးနိုင်၊ပျော်ရွှင်နိုင်သလိုပျော်ရွှင်ရပါလို၏။ သုံးဆောင်ရပါလို၏။ ဒါနအကျိုး ဆက်၍ တိုးပွားကာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရပါလို၏ဟု စိတ်မှ ရည်မှတ် ပြောဆိုပါ။ လေယာဉ်သဖွယ် တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်ဆင်းသက်စားသောက် အသံပေးနေကြသောစာကလေးတွေ၊ငှက်ကလေးတွေကို ကြည့်ပြီးအလှူဒါနကိုပွားကာ ပီတိဖြစ်နေပါ။ … Read more
ကံ ဉာဏ် ဝီရိယနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူငယ်တွေ အသုံးချမှု မလွဲသင့်တဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်
ကံ ဉာဏ် ဝီရိယနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူငယ်တွေ အသုံးချမှု မလွဲသင့်တဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် ကံ ဉာဏ် ဝီရိယနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် ပြောပြချင်တယ်.. ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက.. တံငါသည် တစ်ယောက်က ငါးလေး ၃ ကောင်ဖမ်းမိပါတယ်.. ငါးတစ်ကောင်က တွေးပါတယ်.. ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ဖမ်းမိပြီဆိုတော့လည်း “ကံ” ပေါ့ ။ အသတ်ခံရရုံအပြင် အခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးလေ လည်စင်းခံရုံပေါ့လို့ တွေးနေတယ်။” ဒုတိယ ငါးကတော့ ငါကတော့ အသေတော့ မခံဘူး ငါ့ “ဝီရိယ” အားနဲ့ သေဘေးက လွတ်အောင် ကြိုးစားကြည့်မယ်ဆိုပြီး ခုန်ဆွခုန်ဆွနဲ့ ရုန်းကန်နေတာပေါ့.. အဲ့ဒီမှာ တံငါသည်ကြီးက တော်တော်မငြိမ်တဲ့ “ငါး” သေပေရော့ဆိုပြီး သတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပထမ “ကံ” ပေါ့လို့ တွေးနေတဲ့ ငါးက … Read more
ပြည်သူများ၏ တောင်းဆိုချက်အရတပ်ချုပ်နှင့် ဒုတပ်ချုပ်တို့၏ လစာငွေနှင့် ရပိုင်ခွင့်များအားမြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမှထုတ်ပြန်ပြောကြား
ပြည်သူများ၏ တောင်းဆိုချက်အရ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တိုက်ခိုက်ရေးပါ နိုင်ငံ့တာဝန်များကို ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရသော တပ်ချုပ်နှင့် ဒုတပ်ချုပ်တို့၏ လစာငွေနှ င့် ရပိုင်ခွင့်များအားလုံးကို ယခုထက်ပိုပြီး တိုးမြင့်သတ်မှတ်သွားနိုင်ရေးအတွက် တပ်မတော်မှ လိုအပ်သည်များကို တိကျခိုင်မှာစွာ ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ ကြောင်း မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမှ ထုတ်ပြန်ပြောကြား crd# ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရးပါ ႏိုင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို ပူးတြဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတပ္ခ်ဳပ္တို႔၏ လစာေငြႏွ င့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအားလုံးကို ယခုထက္ပိုၿပီး တိုးျမင့္သတ္မွတ္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္မွ လိုအပ္သည္မ်ားကို တိက်ခိုင္မွာစြာ ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိ ေၾကာင္း ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကား crd# ပြည်သူများ၏ တောင်းဆိုချက်အရ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တိုက်ခိုက်ရေးပါ နိုင်ငံ့တာဝန်များကို ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရသော တပ်ချုပ်နှင့် ဒုတပ်ချုပ်တို့၏ လစာငွေနှ င့် ရပိုင်ခွင့်များအားလုံးကို … Read more